Itoobiya oo looga baqaay iney ilaaliso xuquuda suxufiyiinta - BBC News Somali
Itoobiya oo looga baqaay iney ilaaliso xuquuda suxufiyiinta
Lahaanshaha sawirka CPJ
Image caption Guddiga Ilaaliya Xuquuqda Suxufiyiinta
Guddi ilaaliya xuquuqda suxufiyiinta ayaa ku baaqay inuu ra'isal wasaaraha Itoobiya uu wax ka qabto xorriyad la'aanta haysata suxufiyiinta dalka.
Guddigu warqad ay si toos ah ugu socodsiiyeen ra'isal Abiy Axmed ayaa wuxuu ku sheegeen iney wariyeyaasha dalka oo la sii yo ay tahay xaqiijinta xuquuqda dastuuriga ee muwaaddiniinta u leeyihiin iney xog rasmi ah helaan.
Guddigu waa guddi madax bannaan oo u ololeeya sidi loo ilaalin lahaa xorriyadda saxaafadda caalamka.
Warqad uu guddigu si toos ah ugu soo qoray ra'sal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxay ugu baaqeen inuu isbeddel la taaban karo uu sameeyo xorriyadda saxaafadda ee aadka u liidata si ay shacabkuna u helaan xog ku filan.
Guddiga oo sheegay inuu soo dhaweynayo khudbaddi uu ra'isal wasaaraha jeediyey xilligi xilka loo dhaarinayey ee ku saabsanaa kobcinta nidaamka dimuqraadiyadeed, la dagallanka musuqa iyo meel marinta sarreynta sharciga ee dalka Ethiopia.
Dowladduna waa iney khaladaadkeeda hore ay cashar ka qaadataa guddiga oo sheegay inuu aad uu u ixtiraamayo ballanta uu u qaaday xorriyadda saxaafadda inuu isbeddel dhab ah uu ku keenayo si uu u meel mariyo qodobka 29 ee dastuurka dalka.
Daraasad dheer uu guddigu sameeyey ayaa wuxuu ku sheegayaa waxyaabaha xorriyadda saxaafadd saameynta ugu weyn u geysta uu ka mid yahay xaaladda degdegga ah ee dalka lagu soo rogay oo laamaha amniga awood u siinayo iney warbaahinta ay doonaan iyo suxufiga ay rabaan ay tallaabbo ka qaadaan.
Sida wariyeyaasha 6da ahaa ee 8dda Maarso ay dowladdu xidhay oo uu ka mid ahaa Eskindir Negga iyaga oo dhiganayey xaflad u gaar ahayd.
Guddigu wuxu ra'isal wasaaraha ugu baaqay inuu wax ka beddelo shuruucdda hor istaagayo xuquuqda saxaafadda oo uu ka mid yahay bayaanka ka hortagga argagixisada looga magac daray ee soo baxay 2009 iyo Bayaanka ciqaabta dambiyada 2005 soo baxay oo suxuufiyiinta la xiro loo adeegsado.
Dowladduna waa iney xayiraadda ka qaaddaa 12 wargeys oo ugu afdheera dalka oo ay joojisay 2012 iyo kuwa dibadaha ka howl galo ee ay ka xarrintay dalkeeda.
Waxuuna guddiga ka codsaday ra'isal wasaaraha cadaadiska, cagajugleynta iyo ishortaagga lagu hayo warbaahinta xorta ah ee dalka ama dibadaha laga leeyahay iney joojiso, adeegga Internetkana xayiraadda ay si buuxda uga qaaddo si dalka ay uga hirgasho xorriyad Saxaafadeed oo dhammeystiran.